VANOTARISIRA Kwayedza pasi hamheno zvenyu makasarira, ini wangu wandaida ndakamuwana . . . | Kwayedza
VANOTARISIRA Kwayedza pasi hamheno zvenyu makasarira, ini wangu wandaida ndakamuwana . . .
19 Feb, 2016 - 00:02	 2016-02-19T04:30:52+00:00 2016-02-19T00:00:52+00:00 0 Views
VANOTARISIRA Kwayedza pasi hamheno zvenyu makasarira, ini wangu wandaida ndakamuwana “Nothando” saka vose vachiri kufona pa0774 504 336 chiregai zvenyu zvangu zvakaita zvekuroora.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kana 19 ari HIV negative. Vanoda nezvangu ndibatei pa0777 090 046.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo musikana wekuroora akadzikama ane makore 22 kusvika 27 kana mukadzi ane mwana 1. Asi ndinoda ava kuda zvemba uye anofarira zvekumusha nekuti ndinogara kumusha nguva zhinji. Akasununguka anofona pa0773 416 149 asi vakadzi vevanhu kwete.
Ndine makore 33 ndinodawo mudzimai wekuroora ari pachokwadi. Runhare rangu 0771 860 444.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 27 ndotsvagawo mukadzi wekuroora chero ane mwana 1 akavimbika ari pachokwadi. Anondibata pa0714 285 369, ndatenda hangu.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25 ndosvakawo murume ane makore 40 zvichienda mberi. Ndine vana 2, anondida nhamba yangu 0716 750 911.
Gogogoi, makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vaviri, ndinotsvagawo murume ane makore 40-54 ari HIV positive uye anoshanda. Nhare yangu 0773 373 417.
Ndoda murume ane makore 30 – 35, ini ndine 27 nevana 2. Ndinobatika pa0737 814 065.
Ndiri mudzimai ane makore 44 nemwana 1. Ndinotsvaga murume ane makore 45-50 akagezeka, anoshanda uye anonamata kunyanya kuAFM. Kana wandifaria ndibate pa0776 753 982 asi kana wakaroora kwete.
Ndiri murume ane makore 34 nevana vaviri uye ndinotsvagawo mukadzi ane makore 22 kusvika 28. Anoenda kumasowe anoda ndibatei pa0777 936 590.
Makasimba here? Ndinotsvakawo murume wekushamwaridzana naye ari pachokwadi akafirwa seni asati ava pamushonga. Ndinoda akasununguka kunotorwa ropa ane makore 35 kusvika 34. Ndine makore 34 nevana 4, nhare yangu 0774 576 019.
Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvakawo mukadzi ane makore 30 – 35 wekufambidzana naye. Anoda tumira sms pa0773 280 477.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 36 nemwana mumwe chete. Ndinotsvagawo shamwari yechidzimai anoda zvekuwanikwa ari pachokwadi ane makore 22 kusvika 29. Anoda ngaandibate pa0774 039 448.
Ndiri mukomana ane makore 29 ekuberekwa. Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi shambadzo yangu haina kubuditswa. Ndinotsvagawo mhandara izere, iri pachokwadi uye inogara kwaMutare, Chipinge kana nzvimbo dziri pedyo neMutare. Vanoda zvekutamba kwete. Ndinobatika pa0784 000 959.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana vaviri. Ndotsvakawo murume ane makore 40 zvichikwira, anotya Mwari uye anoda zvemba aine rudo. Vakaroora musafona. Runhare rwangu 0778 223 235.
Ndiri murume ane makore 27 nemwana 1, ndinodawo mudzimai ane makore 26-32. Nhare yangu 0774 497 570.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 35 ndinotsvagawo musikana ane makore 25 kusvika 30 akavimbika ari pachokwadi, asina chirwere. Munokwanisa kundibata pa0715 691 981.
Ndiri kutsvagawo shamwarirume. Ndine makore 41 uye ndiri HIV positive. Anoenda kuchechi anodida ngaandibate pa+27 610 956 099.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 26 ndinotsvakawo murume anoda kuroora.
Ndine mwana wangu mumwe, zvizhinji tinozotaura. Vari pachokwadi ndibatei pa0717 835 201.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18 kusvika 20. Anoda nezvangu anondibata pa0718 479 029.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 42 ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi nekuvaka musha. Ane makore 45 – 55 anoda ngaatumire sms pa0776 806 884.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 30, ndinotsvagawo musikana/mukadzi ane makore 18 -23 ane mwana kana asina. Ndiri kuda munhu asina chirwere nekuti ini handina. Ngaave anofarira kugara kumaruwa. Ini ndinoita basa remawoko ndinogara kwaSeke pedyo neChitungwiza. Anondida fona pa0779 578 758 kana kutumira maSMS ndinopindura. Vanoda kuita zvekutamba musafone zvenyu ndapota.
Makadii veKwayedza? Tinotenda nebasa renyu. Ini ndiri murume anotsvagawo mudzimai ane makore 24-27. Anondibata anondibata pa0774 063 169.
Ndiri murume ane makore 38, ndiri muHarare uye ndoda mukadzi ari HIV negative ane mhuri yake. Ari pachokwadi ngaandibate pa0777 777 752.
Ndotenda veKwayedza nekubuditsa nhamba dzangu mubepanhau renyu, ndakamuwana wandaida saka vachiri kufona pa0771 329 979 ngavachirega havo.
Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika, ndine makore 21 uye ndinoshanda. Anoda ngaandibate pa0776 784 455.
Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana 1, HIV negative uye ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi. Ngaave anoshanda muHurumende asina chirwere ane makore 30 kusvika 40. Nhare yangu 0771 234 223.
Ndinotsvagawo murume ane mazirudo, ndine makore 29 nevana 2. Ngaave anoshanda uye akagezeka munaku. Masms ndopindura, andida ngaandibate pa0776 787 366.
Ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 39. Ini ndine makore 37 nevana 3, nhare yangu 0771 351 504.
Ndiri mukadzi ane makore 30 ndinotsvaka murume ane makore 35 kusvika 40. Ndiri HIV positive, anenge andifarira ngaandibate pa0736 778 272.
Ndiri mukadzi ane makore 30 ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 35-40 ari HIV positive asingaratidze kurwara uye ngaave anoshanda. Nhare yangu 0779 228 954.
Ndiri murume ane makore 39, HIV positve uye ndinotsvagawo mudzimai wokuroora akavimbika anoda zvemusha. Ngaandibate pa0779 135 213.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 18 kusvika 28 asina mwana akarongeka. Ngaave ane utsanana, anogeza asi vakadzi vane varume ndapota hangu kwete. Zvizhinji tozotaura, nhare yangu 0712 092 687.
Makadii? Ndiri murume ane makore 35 nemwana mumwe chete ndinotsvakakawo mukadzi ane vana 2 ane makore 33 zvichidzika. Ndinobatika pa0778 686 646.
Ndine makore 44 uye ndodawo murume ane makore 47 kusvika 55. Nhare yangu 0773 028 050.
Ndiri mukadzi ane makaore 42 ndinodawo murume asina mukadzi ane makore 47 kusvika 55 ari pachokwadi. Ngaandibate pa0779 899 889.
Ndiri mukadzi ane makore 22 ndotsvagawo murume ane makore 30. Nhare yangu 0713 928 334.
Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana 1 ndinotsvakawo shamwari yechirume inoda kuroora inoshanda uye iri negative seni. Runhare rwangu 0783 013 172.
Ndiri kutsvagawo mudzimai anoda zvekuchengetana. Ini handishandi, ndine makore 44. Nhare yangu 0775 791 834.
Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 2 vanogara nababa vavo uye ndinodawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 45 zvichikwira. Ndinobatika pa0774 502 079.
Ndiri murume ane makore 22 nemwana mumwe chete ndinodawo mukadzi ane mwana wake, ane makore 22 zvichidzika. Ngaave asina chirwere anobvuma kunoongororwa ropa. Anondidawo ngaandibate pa0783 527 885 asi anoda zvekutamba neni kwete ndapota hangu.
Makadii? Ndinotsvagawo musikana kana nzvarakamwe iri pachokwadi. Ndine makore 26 uye ndinogara kuGlendale. Vanogara kuShamva kana Bindura fonai pa0772 256 676.
Makadiiko veKwayedza? Ndinotenda nechirongwa chenyu, ndiri murume ane makore 36 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 22- 40 asina chirwere nokuti ini handina. Vanoda ngavandibate pa0784 862 650.